မလေးရှားနိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း မလေးရှားနိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်
This handout photo taken and released on February 25, 2020 by the Prime Minister's Office of Malaysia shows interim prime minister Mahathir Mohamad working in his office in Putrajaya. - Mahathir, 94, the world's oldest leader, has been appointed interim leader while intense political jockeying is underway to formanew government. (Photo by Khairul Ariffin / Prime Minister's Office of Malaysia / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Prime Minister's Office of Malaysia / Khairul Ariffin" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by KHAIRUL ARIFFIN/Prime Minister's Office of Malay/AFP via Getty Images)
ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက် (Mahathir Mohamad) က နုတ်ထွက်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့တာကြောင့် မလေးရှားမှာ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
သူ့ကိုရာထူးကဆင်းဖို့ သူပါဝင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဆီက ဖိအားတွေ တိုးလာနေတဲ့ကြားမှာ မစ္စတာ မဟာသီယာ က သူ့ရဲ့နုတ်ထွက်စာကို မလေးရှားဘုရင်ထံကို တနင်္လာနေ့မှာ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်က သူ့ရဲ့ နုတ်ထွက်စာကို လက်ခံခဲ့ပြီး ဆက်ခံမယ့်သူကို ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အထိ ယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက် တာဝန်ယူဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၃ခုနှစ်အထိ ၂၂နှစ်ကြာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းပြီးနောက် အများက မျှော်လင့်မထားဘဲ ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလက ရွေးကောက်ပွဲမှာ မစ္စတာ မဟာသီယာ ဟာ အာဏာပြန်လည် ရယူခဲ့ပါတယ်။အသက် ၉၄နှစ်အရွယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ လက်ထောက် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း အန်ဝါ အီဘရာဟင် (Anwar Ibrahim) လက်ကို ရာထူးလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တောင်းဆိုခြင်း ခံနေခဲ့ရပါတယ်။
မတျလ ၉ရကျနေ့မှာ လှှတျတောျအစညျးအဝေးစတငျတဲ့ နောကျမှာ ဝနျကွီးခြုပျသဈကို ခနျ့အပျဖှယျရှိတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ပါတီအမြားအပွားက မစ်စတာ မဟာသီယာ ကို ဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ ဆကျလကျ ထောကျခံနကွေပွီး နောကျအစိုးရကို ဘယျသူက ဖှဲ့စညျးမလဲဆိုတာ မသခြော မရရောသေးဘဲ ရှိနပေါတယျ။
မတ်လ ၉ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်တဲ့ နောက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကို ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပါတီအများအပြားက မစ္စတာ မဟာသီယာ ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက် ထောက်ခံနေကြပြီး နောက်အစိုးရကို ဘယ်သူက ဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာ မသေချာ မရေရာသေးဘဲ ရှိနေပါတယ်။
Previous articleဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ နှင့် ဗွီဒီယိုရုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်း
Next articleအစားအသောက် နဲ့ ဆေးဝါးတွေ သက်တမ်းကုန်ရက်ထက် တစ်ရက်ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေး ကောက်မယ်